नाकमा चिल्लो तथा काला वा सेता खिल आएर चिन्तित हुनुभएको छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस् – Dailny NpNews
नाकमा चिल्लो तथा काला वा सेता खिल आएर चिन्तित हुनुभएको छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण २०, २०७७ समय: २३:३९:४१
काठमाडौँ । सुन्दर अनुहार सबैको चाहना हुन्छ । तर विविध कारणले सुन्दरतामा कमजोरी आउँछ। सुन्दरता कमजोर गराउने कारण मध्ये नाकको बाहिर पटी छालामा देखिने बढी चिल्लोपना वा स-साना काला वा सेता खिल हुन्। नाकमा चिल्लो वा यस्ता खिलहरु के कारणले आउछ ? र कसरी आउन नदिने वा हटाउने ?
नाक स्वास्थ्यका लागि मात्र हैन सौन्दर्यको लागि पनि महत्वपूर्ण अंग हो। त्यस कारण नाकको भित्री तथा बाहिरी नाक वरिपरीको छाला भाग स्वस्थ र सफा हुनु पर्छ। नाक वरिपरीको छालामा विशेष गरेर चिल्लो, काला तथा सेता खिल आउने समस्या धेरै व्यक्तिमा हुन्छ।
नाकदेखि आँखाको मुनिसम्मको भागमा ‘सिवाईसेस ग्रन्थी’ हुन्छ । यो ग्रन्थीले शिवम नामक चिल्लो पदार्थ उत्पादन गर्छ। यस्तो चिल्लो पदार्थ छालाबाट सजिलै बाहिर जान नसके पछि, काला, सेता खिलको रुपमा परिणत हुन्छ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
अधिकांश मानिसको बानी हुन्छ, नाक वरिपरी यस्ता खिलहरु आए कोट्याउने, वा निचोर्ने । यस्तो गर्दा छालामा प्वाल पर्नुका साथै खाल्टा–खाल्टा दाग देखिन्छ ।
इन्फेक्सन भयो भने कान वरिपरीको भाग दीर्घकालिन कुरुप नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले पनि यो बढ्दो उमेरसँगै ग्रन्थीको प्रभावले देखा पर्ने समस्या भएकाले आउँछ, जान्छ। सकभर चलाउनु हुदैन्।
दिनको तीन पटक सफा पानीले मुख धुने ।
बाहिर हिँड्दा वा दिनको एक पटक आफ्नो छालालाई सुहाउने गुणस्तरीय क्रिमको प्रयोग गर्ने ।
धुवाँ, धुलोबाट आएपछि फेसवासले मुख सफा गर्ने ।
बढी नै समस्या देखा परे हप्तामा एक चोटी स्क्रप लगाएर सफा गर्ने ।
सन्तुलित आहारको सेवन गर्ने ।
अरुले भनेको भरमा बजारमा पाइने जुन सुकै क्रिमको प्रयोग वा जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने ।
यदि धेरै समस्या आयो भने चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम आौषधि सेवन वा अन्य तरिका अपनाउनु पर्छ ।